Wararka - Habka shaabadaynta birta
Habka shaabadaynta birta
Geeddi -shaabadaynta: saldhigga badan ee dhinta shaabadaynta joogtada ah ee joogtada ah, mashiinka mashiinka diyaarinta ciddiyaha ayaa hoos loogu shaabadeeyey si loo dhammaystiro geedi -socodyada sida isku -dubaridka, sameynta iyo alxanka. Si kastaba ha ahaatee, weli waxay leedahay qayb yar oo ku xidhan xaashida shaabadaynta, oo xaashida shaabaddu waxay gashaa qalabka daaweynta dusha sare ee ultrasonic oo leh workpiece ka dib shaabadaynta iyo alxanka si meesha looga saaro dufanka antirustka iyo slag alxanka. Dhamaystir ka saarista digirta alxanka iyo burrs qolka qashin -qubka.
Tani waa mid aad lagama maarmaan u ah in laga fogaado wareegga gaaban iyo wareegga gaaban ee korontada marka la isticmaalayo qaybaha shaabadaynta. Waqtiga labaad ee daaweynta dusha sare ee ultrasonic, kahor kormeerka tayada qaybaha shaabadaynta, tikniyoolajiyadda nadiifinta dusha ultrasonic mar labaad ayaa loo adeegsadaa si meesha looga saaro haraaga ka hadhay inta lagu jiro toogashada. Kadib marka dhammaan hawlgallada kor ku xusan la dhammaystiro, qaybaha shaabadaynta ayaa gabi ahaanba laga soocaa saxanka madhan oo si gooni ah ayaa loo kaydiyaa. Qaybaha shaabadaysan oo leh tayo liidata ee mashiinka diyaarinta ciddiyaha ayaa lagu ridayaa sanduuqa qashinka, iyo qaybaha shaabadaysan ee aqoonta leh ayaa si toos ah u gala aqoon isweydaarsiga baakadaha.
Habka wax -soo -saarka, sida looga fogaado waxyeellada qaybaha shaabadaynta ayaa lagu soo koobay sida soo socota tixraacaaga:
1. Beddel qalabka shaabadaynta si loo hagaajiyo badbaadada wax -soo -saarka iyo isku halaynta. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira arrimo badan oo aan ammaan ahayn oo ku jira nidaamka xakamaynta iyo nidaamka kontoroolka korontada ee qalab badan oo shaabbad duug ah. Haddii la sii isticmaalo, waa in farsamo ahaan loo beddelaa. Soo -saaraha qalabka shaabaddu waa inuu hagaajiyaa naqshadeynta alaabta si loo hubiyo badbaadada iyo isku halaynta qalabka shaabadaynta.
2 rakib qalabka difaaca. Dufcaddii wax -soo -saarka oo yar awgeed, aaladaha badbaadada badbaadada waa in lagu rakibaa hawlgalka shaabadaynta oo aan ogaanin otomaatiga ama aan adeegsanayn qalab shaabadaysan oo badbaado leh, si looga hortago shilalka dhaawaca ee ka dhasha hawl -xumada. Aaladaha difaaca ee kala duwan waxay leeyihiin astaamo iyo baaxad adeegsi oo kala duwan. Isticmaalka aan habboonayn ayaa weli sababi doona shilal dhaawac. Sidaa darteed, shaqooyinka aalado kala duwan oo ilaalin ah waa in la caddeeyo si loo hubiyo adeegsiga saxda ah iyo hawlgalka nabdoon.
3. Dib -u -habaynta habka, caaryada iyo habka hawlgalka si loo xaqiijiyo hawlgalka gacanta ee ka baxsan caaryada. Soosaarka baaxadda leh, waxaan ku bilaabi karnaa dib -u -habaynta geeddi -socodka iyo caaryada si loo xaqiijiyo makaanikada iyo otomaatiga. Tusaale ahaan, adeegsiga otomaatiga, mashiinnada shaabbadaynta saldhigyada badan iyo adeegsiga, adeegsiga aalado goynta badan iyo aaladaha wax -soo -saarka ee farsameysan, iyo adeegsiga tillaabooyinka geedi -socodka isku -dhafan sida geeri joogto ah iyo isku -darka oo dhinta. Waxaas oo dhami ma xaqiijin karaan amniga hawlgalka shaabadaynta, laakiin sidoo kale waxay si weyn u hagaajinayaan wax -soo -saarka wax -soo -saarka.
Waqtiga dhejinta: Aug-26-2021
Alaabta La Soo Bandhigay, Khariidadda bogga, Qaybaha shaabadaynta jumlada, Aluminium CNC Qaybo Machined, Sheet Birta Stamping Products, Boolal, Dhimashada Magnesium, Guga Saxanka, Dhammaan Alaabta